Cristiano Ronaldo oo ka warbixiyay hal arrin uusan waligiis ku ilaabi doonin Zidane – Gool FM
(Yurub) 13 Agoosto 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Juventus Cristiano Ronaldo ayaa amaanay macalinkiisii hore ee Zinedine Zidane, isagoo sheegay in waxyaabo badan uu iga waawiyay inta ay ka wada shaqeenayeen naadiga Real Madrid.
Cristiano Ronaldo ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “DAZN” wuxuu ku amaanay macalinka haatan leyliya kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane wuxuuna yiri:
“Zidane wax badan ayuu iga caawiyay, xaqiiqdii waan qadariyaa isaga, la shaqeyntiisa ayaa iga dhigtay inaan ku qanco waxa aan hada ahay, waana in kabadan sidii aan horey u ahaa, sababtoo ah qaabkiisa gaarka ah uu u hadlo, una hogaamiyo kooxda iyo sida uu iila dhaqmay waa wax cajiib ah”.
“Waxaan caadeystay inuu igu yiraahdo Cristiano waa inaad raaxeysataa, maxaayeelay waxaad thay qofka isbadal nagu sameyn kara, wuxuu ahaa qof daacad ah waana sababta uu ugu sii jiri doono qalbigeyga”.
Ronaldo ayaa ka soo hoos ciyaaray Zidane tan iyo bishii Janaayo 2016, ilaa xagaagii hore ee 2018, xiligaas uu Cristiano u wareegay kooxda Juventus uu haatan ka tirsan yahay, kaddib mudo dhan 9 sano uu ku qaatay safka Los Blancos, wuxuuna la qaaday koobab badan ee isugu jira kuwa maxaliga iyo kuwa banaanka ah, isagoo sii waday guulaha shaqsiyadiisa gaarka ah.
Halyeey Man United ah oo si jees-jees ah kag hadlay go’aankii uu Dybala ku diiday imaatinka garoonka Old Trafford